Ogaden News Agency (ONA) – Garabkii TPLF Ee Guulaystay oo Qorshayaal Cusub Wada.
Garabkii TPLF Ee Guulaystay oo Qorshayaal Cusub Wada.
Posted by Dulmane	/ December 1, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya qorshayaal ay wadaan kooxda guulaysatay ee kamidka ah garabyadii ururka TPLF.
Xog hoose oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in kooxda kuguulaysatay hogaaminta TPLF ee gudoomiyaha udooratay Debretsion Gebremacheal ay wadaan qorshe ay kaga takhalusayaan qaar kamid ah saraakiisha sar sare ee wayaanaha.
Xogta aan helay ayaa muujinaysa in talaabada 1aad ee kooxdu ay qaadanayso ay tahay in xilka qaadis lagu sameeyo Raysalwasaaraha maqaar saarka ah ee wayaanaha, kaas oo sida ay kooxdu sheegtay kufashilmay hogaamintii wadanka isla markaana lumiyay kala dambayntii.
Sidoo kale kooxda ayaa doonaysa in ay shaqada ka eryaan General Samore Yonis oo ah taliyaha ciidamada wayaanaha, waxayna kooxdu doonaysaa in ay ugu mar marsooto in uu yahay in gaboobay oo howl gab ah.
Dhinaca kale kooxdan ayaa la ogaaday in ay qorshaynayaan sidii ay xilalka uga qaadi lahaayeen wakiilada gumaysiga ee Ogadenia, Oromia iyo Ahmara, kuwaas oo dhamaantood lagu eedeeyay wada shaqayn la’aan iyo in ay taageereen guruub gaar ah.
Ninka loo doortay gudoomiyaha ururka Debretsion Gebremicheal oo ah raysal wasaare kuxigeen ayaa ah nin siwayn uga dhex muuqday kooxda guulaysatay waxaana lafilayaa in uu kushaqayn doono siyaasad kabadalan midii hore isagoo eryi doona dhamaan dadkii kasoo hor jeeday.